‘भ्यालेन्टाइन’को प्रेममय शुभकामना ! – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
‘भ्यालेन्टाइन’को प्रेममय शुभकामना !
२०७१ फाल्गुन २, शनिबार ०२:४९ गते
‘फेब्रुअरी १४ भ्यालेन्टाइन डे’ अर्थात् फागुन २ गते प्रेम गर्नेहरुका लागि विशेष दिन मानिन्छ । रोमका सन्त भ्यालेन्टाइनको सम्झनास्वरुप यो प्रेमदिवस अर्थात् प्रणय दिवस विश्वभर विभिन्न कार्यक्रमहरु आयोजना गरी मनाउने प्रचलन छ । पश्चिमा संस्कृतिका रुपमा भित्रिए पनि नेपालमा केही वर्षयता भ्यालेन्टाइन डेको मह¤व बढ्दै गइरहेको छ । आज प्रेम प्रस्ताव राख्ने, प्रेम सन्देशहरु आदानप्रदान गर्ने र जीवनसाथी रोज्ने गरिन्छ । नेपालमा भ्यालेन्टाइन पनि एउटा चाडकै रुपमा स्थापित भइसकेको छ । प्रेम जित्नेहरुका लागि सुखद र हार्नेहरुका लागि दुःखद बन्न सक्छ । त्यसैले, प्रेम गर्नुअघि राम्रोसँग सोचविचार गरेर उपयुक्त प्रेमीप्रेमिकाको खोजी गरिनु उपयुक्त हुन्छ । पारस्परिक विश्वास, आत्मीयता र एकअर्काको भावना बुझेर गरिएको प्रेम सुखद हुने विश्वास गरिन्छ ।
भ्यालेन्टाइन डे जति चर्चित छ, यसको पछाडि भने एउटा दुःखद इतिहास लुकेको छ । ईसापूर्व २६९ मा रोमका पूजारी सन्त भ्यालेन्टाइनलाई प्रेम गरेको र प्रेम गर्नेहरुलाई विवाह गराएको आरोपमा राजा क्लाउडियसको आदेशमा फेब्रुअरी १४ कै दिनमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको थियो । त्यसपश्चात् प्रेम गर्नेहरुको चाडका रुपमा यो दिनलाई लिन थालिएको
हो । रोमका राजा क्लाउडियसले युवाहरुलाई प्रेम गर्न र विवाह गर्न बन्देज लगाएर सैनिकमा भर्ती गरी युद्धमार्फत संसारलाई आफ्नो कब्जामा राख्ने इच्छा राख्थे । तर, युवाहरु राजाको इच्छाविपरीत आफ्ना श्रीमती र सन्तानको मायाले सैनिकमा भर्ती हुन छाडेका थिए । शासकहरु क्रूर हुन्छन, आफ्नो स्वार्थका लागि जस्तोसुकै कार्य गर्न पछि पर्दैनन् । क्याउडियसले पनि युवाहरुलाई प्रेम र विवाह गर्न प्रतिबन्ध लगाएका थिए । तर, त्यसको प्रतिकार गर्दै सन्त भ्यालेन्टाइनले प्रेमका पूजारीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने काम गरे ।
राजा क्लाउडियसले १८ वर्ष पुगेका सबैलाई सैनिकमा भर्ती हुन र विवाह र प्रेम गर्न नै प्रतिबन्ध लगाएपछि कयौँ युवाहरु घरभित्रै लुक्न बाध्य भए । प्रेमका पूजारी भ्यालेन्टाइनले यसविरूद्ध गोप्य रुपमा प्रेमजोडीहरुको विवाह गराइदिन थाले । उनले यस्तो अभियान चलाएपछि भ्यालेन्टाइनलाई बन्दी बनाइयो । जव भ्यालेन्टाइन बन्दी बने, उनलाई भेट्ने मानिसहरुको भीड लाग्न थाल्यो । भेट गर्न आउनेमध्ये जेलरकी छोरी पनि एक थिइन् । भेटघाटकै क्रममा भ्यालेन्टाइन र जेलरकी छोरीबीच आत्मीयता बढ्दै गयो । र, अन्ततः गहिरो प्रेम स्थापित हुन भयो । उनीहरुको पवित्र प्रेम धेरै समय टिक्न पाएन, क्रूर शासक क्याउडियसले फेब्रुअरी १४ मा भ्यालेन्टाइनलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाए । आफ्नो जीवनको अन्तिम दिन अर्थात् मृत्युभन्दा अगाडि भ्यालेन्टाइनले जेलरकी छोरीलाई अन्तिम सन्देश पठाए । र, अन्त्यमा लेखेका थिए– उही तिम्रो भ्यालेन्टाइन ।
प्रेम गर्नेहरुका लागि, प्रेम प्रस्ताव राख्नेहरुका लागि र प्रेमलाई विवाहमा बदल्नका लागि यो दिनको मह¤व रहँदै आएको छ । प्रेम अर्थात् प्रणय दिवसलाई लक्षित गरी नेपालमा प्रेमको प्रतीक मानिने एक लाखवटा गुलाफका फूल भारतबाट भित्रिएको खबर आएको छ । गुलाफको फूलको माग बढ्नु भनेको प्रेम गर्नेहरु पनि बढ्दै जानु हो । आजको दिन देशभर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी प्रेमदिवसलाई विशेष बनाइएको छ । आज हरेक जोडीहरुले प्रेम विनिमय गरेर सम्बन्ध झनै गाढा बनाउन सकून् । हरेकको प्रेमजीवन सफल
रहोस् । प्रेममय ढंगले बितोस् भ्यालेन्टाइन डे, सबैलाई प्रेमपूर्ण शुभकामना !